Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: Tigricha Somaaliyaa miila tokkoon dhaabe kana beeytuu?
Tigricha Somaaliyaa miila tokkoon dhaabe kana beeytuu?
Maqaan isaa Gebre' jedhama. Somaaliyaa keessatti Jeneraal Gabree jechuun beekama. Nama Wayyaanee bakka bu'ee Somaaliyaa keessatti ramadameedha. Dhalootaan Tigreedha. Kan Somaliyaa seene yeroo duraatiif bara 2006. Gaafa jalqaba dhufu ajajaa waraana Wayyaanee kumoota hedduu ture. Bara 2006 keessa magaalaa guddittii Somaaliyaa kan taate Muqdishoo qabachuuf jecha, keemikaalota gurguddaa kan akka Foosfarasii Adii ummata nagayaatti darbuudhaan jumlaan fixuu isaatiin ummata Somaalee biratti komatama.
Achi booda hojii diplomaasii fakkeessee magaalaa Muqdishoo teessuma godhachuun baroota inni Somaaliyaa ture kana hunda isatu biyyattii akka fedhe godhee bulcha, maqaaf nama Somaalee of dura kaa'ee; akkuma OPDO fuuldura qabanii ummata Oromoo bulchan, Somaaliyaa keessattis hanga filannoo dheengaddaatti, hoggantoota jaraa kan ajaju Gabree kana.
Aangoo hanga hoggantoota Somaaliyaa tumuu/dhaanuutti qaba; akkuma Mallas Zeenaawiin hoggantoota OPDO tumutti. Fakkeenyaaf, perezidaantii Soomaliyaa bara 2004-2008 kan ture Abdullaahii Yuusuf, yeroo akka ICU irraa kaasaniif Itoophiyaa waamate, Muqdishootti ajjeechaa jumlaa Wayyaaneen goote ilaalchisee perezidaantichi komii dhiheessinaan, Gabreen aaree perezidaanticha yeroo afur kaballaan dhahee Perezidaanticha lafatti kuffisee shugguxii itti qabee ajjeesuuf itti dhaadate jedhan. Sababa saniif guyyaa san eegduu perezidaantichaa irraa qawwee waan hiikeef perezidaantichi waraana Gamtaa Afrikaa (AMISOM) irraa eegduu barbaadate. Warra waan Gabreen jedhe godhuu didanii fi nama inni fedhu filachuu didan, hedduu isaanii irratti adaba ajjeechaa akka fudhachaa ture di dubbatama. Hangana hunda aangoo qaba Gabreen Somaliyaa keessatti.
Aangoo isaa kana cabsanii barana waan nama biraa filachuu danda'aniif, ummanni Somaaliyaa gammachuu daangaa hin qabnerra jiru.
Yoo viidiyoo isaa argitanii jiraattan tahe, guyyaa filannoo Somaaliyaa ammaa kanallee yeroo namoota Wayyaaneen bakka buufattee filannoof dhiheessite gorsu jala deemanii dhoksaan waraabaa turan. Akkasumas yeroo moo'ataman akka malee gadduu isaa bakka galma keessatti ummata keessa taa'ee yeroo gaddu suuraa kaasanii miidiyaarra naanna'aa ture. Yeroo ammaa kana ummanni Somaaliya akka Gabreen biyya isaaniitii bahu gaafacha jiran.
Hojiin guddaan Gabreen Somaaliyaa keessatti hojjatu, meeshaa waraanaa maqaa nagaya eegsifna jedhanii mootummoota dhihaa kan akka Ameerikaa faa irraa argatan gurguruudha. Jarri inni qawwee itti gurguru, jaruma garee shororkeessitootaati. Mala kana kan baase Mallas Zeenaawiidha jedhan. Sababni tooftaa kana fideef, qawwee itti gurguruudhaan akka jarri shororkeessitootaa hin banne godhanii warra dhihaa irraa maqaa shororkeessitootaan lolla jedhuun gargaarsa guddaa argachuufi jedhu keessa beektotni. Gabreen amma dureessa qabeenya guddaa horateedha.
Erga filannoo ammaa kan Gurraandhala 8, 2017 Somaaliyaa keessatti tahe kana irratti namoota Wayyaaneen bakka buufatte harka dhabanii injifatamanii as, shira Gabreen godhaa ture sirriitti ifa baatee kan ummata Soomaaliyaa hunda dallansiifte taatee wanti hedduu dubbatamaa jira.
Shororkeessitoota jiraachisaa maqaa Shororkeessitootaan gargaarsa guuratti. Wayyaaneen shororkeessitoota gaanfa Afrikaa gudditti warra kaan caaltu akka taate addunyaan yoom beekti laata?
Maddi odeeffannoo miidiyaalee Somaalee adda addaa hedduu irraa waan dhagaye cuunfee isiniif dhiheesse waan taheef, takka takkaan isinii tarreessuu dhabuu kiyyaaf na hofkolchaa!
| Gurraandhala 13, 2017 ]
Posted by Hasan Ismail at 3:56 PM
Walhubachuufi Ilaalcha Gaarii Waliif Qabaachuu ( ...
Feyisa Lilesa, Marathoner in Exile, Finds Refuge i...
"Breaking News: Guraandhala 22/2017 Obbo Diriirsaa...
Alii Muussaa kan jedhamu, miseensa dargii fi ajaja...
Gummii Hooggansa Oromoo Lammaffaa; Ilaalchafi Dha...
Qabeenya Oromiyaa Saamsisaa Hoji-dhabdummaa Hir'is...
Tigricha Somaaliyaa miila tokkoon dhaabe kana beey...
Mudannoon weerara maqaa liyyuu polisiin murnii gab...
Seenaa Generaal Abdiisaa Aagaa fi Kufaatii Xaaliya...
Knuste hjertet mitt
Jijjiirraan imaammataa biyyattii guddittii addunya...